Kedu ka i si nwee ihe ịga nke ọma n'ịmepụta backlinks gị na ebe nrụọrụ weebụ gị?
N'ezie, ọ bụ na ajụjụ na ịmepụta backlinks gị na ebe nrụọrụ weebụ bụ n'etiti isi ihe iji nweta ihe ịga nke ọma na Search Engine njikarịcha. Aghọtara na enwere ọtụtụ ụzọ dịgasị iche iche iji mee ka usoro ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị. Ma olee ihe ị ga - esi mee ka azụ backlinks gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị? Ọfọn, nke ahụ na-adabere. Ma mụ onwe m, ekwenyere m na m na-eme ugbu a ịmepụta ihe jikọrọ ihe na-emetụ aka na-aga nke ọma - bg goodrich g-grip. Ya mere, ka anyi mee ka o doo anya - imeghari backlinks na-egosi na "egwu egwu," n'enweghi ike inyoghi isi ma mebie ntuziaka webmaster nke Google.M ga-eleru anya na ụdị "njikọ na-adịghị ike" nke dị na njikọ njikọ (i kwesịrị izere ha n'oge ọ bụla!). Enwere m olileanya na ị ga-ahụ na ha nwere ezi uche mgbe ị na-ewu ụlọ azụmaịtị gị - ụzọ kachasị mma ọ ga-esi kwe omume.
Zere Nlekọta Ụlọ Mgbasa Ozi Gị na:
Njikọ njikọ na Wheels
Nkwekọrịta njikọ dị n'etiti ihe kachasị mma na-ewu ụlọ, ma a ghaghị izere ya - nke mbụ. Ma e nwere ọtụtụ iri ihe ntanetị weebụ na iche iche ọrụ ntanetị n'ịntanetị iji mee ka ị nwee ike ịmekọrịta njikọ njikọ. N'ezie, ịgbanwere ụfọdụ backlinks gị na ndị na-ede blọgụ gị nwere ike ịbụ ezigbo echiche. Otú ọ dị, ị na-ejikọta ọnụọgụ na njikọta njikọta, yana njikọta wiil (a. k. a. atụmatụ pyramid nke njikọ njikọ) na-ebutekarị nnukwu ibu na ọtụtụ backlinks dị ala, nke pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla. Ọ pụtara na ịchọta mgbanwe mmekọrịta ma ọ bụ wiil bụ n'ezie ịhapụ oge na ego.
Kedu ihe ọzọ - ime ya na-abụkarị ụzọ kachasị mma iji nweta nlezianya dị njọ site na engines ọchụchọ dị ka Google n'onwe ya. Na nke ahụ pụtara ihe ọ bụla ma ọ bụghị nnukwu ogo nkwụghachi ụgwọ na-emetụta gị na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog. Ọ bụ ya mere ịmekọrịta na njikọ abụghị n'ezie ụzọ nke ụlọ azụlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị, nri?
Ihe na-adịghị mkpa
Ntanetị ma ọ bụ blọọgụ ndị na-adịghị mkpa bụ ihe ọzọ nke a na-ekwesịghị iji mee ka redlinks dị n'okike. N'ezie, ọ bụrụ na ị gabiga na ịmepụta ọtụtụ backlinks na isi nke atọ ndị na-enweghị ihe jikọrọ ya na isi okwu gị ma ọ bụ ọrụ ụlọ ọrụ, njikọ ndị dị otú ahụ ga-enye gị ma ọ dịkarịa ala ntakịrị ihe (ma ọ bụrụ na ọ bụghị efu) dị na PageRank gị. Ma ọ bụ, na nke kachasị njọ, Google nwere ike ịkọwa gị ma ọ bụrụ na ịchọpụta ihe ndị a dị ka ndị aghụghọ na ndị na-eme ihe nchịkwa.
Ụgwọ na ndị ọzọ na-enwu enyo
Nchịkọta iwu nke nchịkọta ọchụchọ nke ụwa na-ekwupụta ozi doro anya - ịzụta ma ọ bụ ire azụlinks a gaghị anabata ya n'ụzọ ọ bụla n'ọnọdụ ọ bụla. Nke ahụ bụ ihe gbasara njikọ nkwụ ụgwọ - ọ ga - eme na Google chọpụta atụmatụ azụmahịa yana ịmepụta profaịlụ njikọta, ọ ga - eme ka ọkpụkpụ dị n'akụkụ niile nke azụmahịa ahụ. N'agbanyeghị na backlinks a na-akwụ ụgwọ nwere ike iyi ka ọ dị oke mma na ndị dị mma ma dị mma, ihe ize ndụ dị oke.
N'ime ebe ndị ọzọ na-enyo enyo nke na-agaghị eme maka ịmeghachi backlinks na ebe nrụọrụ weebụ gị n'ụzọ nkịtị, ana m atụ aro ịchọta ihe ndekọ ederede dị ala ma jikọta ugbo. Ee, ihe dị ka afọ abụọ gara aga, ha na-eji uru dị ukwuu maka ịmepụta ọnụ ala dị ala - enwere m ikweta eziokwu a. Ma ugbu a, atụmatụ ndị ahụ anaghị arụ ọrụ ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta onwe gị ntaramahụhụ ngwa ngwa na-adịghị agbanwe agbanwe.